Isbitaalka Digfeer oo maanta albaabada la isugu laabay Coronavirus dartiis | Xaysimo
Home War Isbitaalka Digfeer oo maanta albaabada la isugu laabay Coronavirus dartiis
Isbitaalka Digfeer oo maanta albaabada la isugu laabay Coronavirus dartiis
Waxaa maanta albaabada la’isugu laabay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, sababo la xariira cudurka faafa ee Coronavirus, sida ay xaqiijiyeen saraakiil dhanka caafimaadka ah oo lagu kalsoon yahay.
Saraakiisha aan la hadalnay ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya la joojiyey qaabilada bukaanada imaan jiray isbitaalkaasi.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen inay furan tahay kaliya qeybta gurmadka deg-deg ah ee loogu talagalay dadka dhaawacyada ah iyo haweenka foosha ah.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in xaalad deg-deg ah lagu soo rogay isbitaalka, islamarkaana la karantiilay dhaqaatiir, shaqaale iyo howlwadeeno ka tirsan isbitaalka Digfeer, kuwaas oo la sheegay in looga shakiyey cudurka halista badan ee Coronavirus.
Arrintaan ayaa ka dambeysay, kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay shaacisay illaa 9 xaaladood oo Fayruska Corona ah oo saddex ka mid ah dadka laga helay ay ka howlgalayeen isbitaalka la xiray ee Digfeer.
Cabsida laga qabo faafida COVID-19 ee Soomaaliya ayaa sii kordheysa marba marka ka dambeysa, iyadoona dowladda federaalka ay wado dadaallo lagu xakameynayo cudurka.